TGV Frantsa: manao faradoboka koa anio any Paris | NewsMada
TGV Frantsa: manao faradoboka koa anio any Paris
Na tsy mbola tanteraka aza ny zo tokony hifidy ho an’ny Malagasy any ivelany, tsy mipetra-potsiny ny sampana TGV any Frantsa. Antony, fandraisana andraikitra sahady amin’ny fitiavan-tandrazana sy hampandrosoana an’i Madagasikara amin’izao kihon-dalana ho an’ny firenena izao. Manao faradoboka koa izy ireo, anio asabotsy any Paris, manentana ny mpifidy malagasy handrotsa-bato ho an’ny kandidà faha-13, Rajoelina Andry.
Nohitsin’ny sekretera jeneraly (SG)-n’ny TGV Frantsa, Ramaharavoandrainy Michel, fintinina hoe Ravo Michel, fa “raha ny rariny sy ny hitsiny, tokony ho lany tamin’ny fihodinana voalohany Rajoelina Andry ka azo adika fa voahitsakitsaka indray ny zon’ny Malagasy. Tsy manana anton’asa afa-tsy ny mitsikera sady manaratsy ny sasany satria mialona ity kandidà ity.
Entanina ny mpifidy tsirairay hanamarina ny anarany ao anatin’ny lisi-pifidianana ary hifidy ny kandidà faha-13, hanatanterahany ny veliranony, hitondra fiovana goavana ho an’ny fiainan’ny Malagasy rehetra. Aoka hiaro ny zony ny tsirairay satria ny kandidà faha-13 no afaka hanatanteraka sy hanome fanantenana ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Miankina amintsika ny ny hoavin’ny firenena”.